အိပ်မက်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူ၏စာအုပ် / မှစ. နံရံကပျကျွွောငာ
အိပ်မက်အတွက်, လူတစ်ဦးသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောမြင်ကွင်းတစ်ခု, မိတ်ဆွေများ, ရန်သူများကိုနှင့်ကွယ်လွန်သူပင်ဆွေမျိုးများပေါ်လာလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးဘဲ၏အိပ်မက်? ဘယ်အလားတူအိပ်မက်ကိုဆိုလိုတာနိုင်မည်နည်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရကျိုးနပ်။ အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးဘဲ၏အိပ်မက် - အိပ်မက်ထဲတွင်ဘဲ၏အခြေခံအနက် - ဒါအန္တရာယ်ကင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ထက်
ပင့်ကူအဖြစ်မှန်ထိတ်လန့်နှင့်အခြားအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေ, များစွာသောတွှေ။ သို့သော်အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးအနက်ရောင်ပင့်ကူ၏အိပ်မက်မက်? ဒီအိပ်မက်ဥပဒ်များနှင့်ဝမ်းနည်းမှု portends ရှိမရှိ? သို့မဟုတ်သူသစ်ကိုစတင်နှင့်တစ်ဦးအဆင်သင့်ရလဒ်ကိုကတိပေးထား? အနက်ရောင်ပင့်ကူ၏အဘယ်ကြောင့်အိပ်မက် - ပေါ်ပေါက်ရေး၏အခြေခံအနက်
အိပ်မက်များတခါတရံစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာပျော်စရာ။ အိပ်မက်တွေကိုကြောက်လန့်ဖြစ်ကြပြီးအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သူတို့ထဲကတစုံတယောက်သောသူသည်ကိုရှင်းပြသင့်တယ်။ အဘယ်ကြောင့်သခွားသီး၏အိပ်မက်? စုံစမ်းစစ်ဆေးရကျိုးနပ်။ အဘယ်ကြောင့်သခွားသီး၏အိပ်မက် - အခြေခံအနက်ကိုလတ်ဆတ်တဲ့သခွားသီး
အိပ်မက်များအနာဂတ်မှာသို့လွန်ခဲ့သည့်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယူပါ။ ညစဉ်ညတိုင်း, အိပ်ပျော်ကျဆင်း, သင်ညအချိန်တွင်အိပ်မက်၌ယနေ့ဖြစ်လတံ့သောအရာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းလို့မရပါဘူး။ တစ်အိပ်မက်ဆိုလိုတာကငါးဖမ်း၏အဘယ်ကြောင့်အိပ်မက်? စုံစမ်းစစ်ဆေးရကျိုးနပ်။ အဘယ်ကြောင့်ငါးဖမ်း၏အိပ်မက် - ပင်မအနက်ငါးဖမ်း, ယ့်ပုံပဲ - တော်တော်
အိပ်မက်များကိုမကြာခဏအပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုဆောင် ခဲ့. , ဒါပေမယ့်နှလုံးမှာအလွန်စိုးရိမ်ပူပန်ပြီးနောက်အဘယ်သူသည်ထိုလည်းရှိပါတယ်။ Downers, တစ်ဖွဲ့လုံးကသူတို့ကိုမယ့်တစ်ဦးချင်းစီဇာတ်ကောင်အိပ်မက်အနက်ကိုဘော်ပြရန်အကြံပြုပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ညစ်ပတ်ရေအိပ်မက်? စုံစမ်းစစ်ဆေးရကျိုးနပ်။ ညစ်ပတ်ပေရေရေအဘယ်ကြောင့်အိပ်မက် - အခြေခံ
12...6နောက်တစ်နေ့ →